Izilwane Izesekeli Jungle Of Aldo Messina
Izilwane Nezesekeli I-Jungle Of Aldo - Messina
Konke okuhle ngezilwane ezifuywayo
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-8)
"Ihlathi lase-Aldo", inamahhovisi ayo amabili eVia Lanzetta is.439 / G futhi ngeGaribaldi 233 a Messina, isitolo esikhethekile Ukuthengiswa kokudla, izesekeli nezinye izinto ezifuywayo Ugcwele kahle futhi uyakwazi ukufeza izidingo zabangane bakho abanezinyawo ezine.
Ngaphezu kwalokho, kusuka "Ihlathi lase-Aldo" ungathola yonke into oyidingayo ngenhlanzeko nokuzilolonga ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, kusuka kumikhiqizo emihle kakhulu nangamanani entengo ahlukile.
"I-Jungle of Aldo" - Ukudla Kwezilwane
"Ihlathi lase-Aldo", a Messina, ihlinzekelwe kabanzi ngakho konke okuhlobene Ukudla labangane bakho Animali: Abasebenzi ngokuqinisekile bazokwazi ukukukhombisa imikhiqizo emihle kakhulu yokudla kwezinja, amakati, izinyoni, izinduku kanye nezilwane ezihlukile. Ngenxa yothando lomsebenzi wabo nothando lwezilwane, iStaff of "Ihlathi lase-Aldo" ihlala isesikhathini ngezindaba zakamuva mayelana Ukudla kwezilwane nenhlala-kahle futhi njalo ngifuna imikhiqizo engcono kakhulu emakethe yokudla yezilwane. Ngaphezu kwalokho, "Ihlathi lase-Aldo" yenza Inkonzo Yasekhaya ukukunika isandla esengeziwe ekunakekelweni nasenhlalakahleni yabangane bakho bezilwane.
"I-Jungle ye-Aldo" - Izesekeli nezindatshana zezilwane
"Ihlathi lase-Aldo" , a Messina, ngamahhovisi ayo amabili eVia Lanzetta is.439 / G futhi nge-Garibaldi 233, nayo isingatha Izesekeli nezindatshana zezilwane ezifuywayo. Amathoyizi, Izithwali, Izimpophoma, AmaKennels, Amakheji nakho konke okudingayo kubangani bakho abanezinyawo ezine kuhlale kunakwa kakhulu Ikhwalithi Nokuphepha kwemikhiqizo! Izisebenzi ze "Ihlathi lase-Aldo" izokwazi ukukunikeza izeluleko eziphezulu ku-Izesekeli Nezinto zezilwane ukukuqondisa ekuthengeni kwakho.
"I-Jungle of Aldo" - Ukuhlanzeka Nokujola kwezilwane
"Ihlathi lase-Aldo", eMessina, futhi isitolo esinezitolo eziningi Imikhiqizo yezilwane, Imikhiqizo yokuhlanzeka futhi for Ukujola zabangani bakho abanezinyawo ezine. Kusuka "Ihlathi lase-Aldo" uzothola konke okudingayo ukuze unakekele inhlala-kahle yezilwane zakho! Imikhiqizo eminingi yokugcina izilwane zakho ziphilile, ziqinile futhi zihlanzekile ngamanani atholakala ngaso sonke isikhathi: iStaff of "Ihlathi lase-Aldo" izokuqondisa ngezeluleko ngokucophelela ekukhetheni umkhiqizo ofanele ngokuya ngezidingo zesilwane sakho.
"I-Jungle ye-Aldo" - Ukuncintisana kanye ne-Sympathy
"Ihlathi lase-Aldo", a Messina, isitolo se Ukudla, izesekeli nezindatshana zezilwane lapho uzothola khona phezulu kwemikhiqizo yokunakekelwa nenhlala-kahle yabangane bakho abanezinyawo ezine.
Ngenxa yemikhiqizo ephezulu kakhulu nenhlonipho enikelwe amakhasimende, abasebenzi "Ihlathi lase-Aldo" ingaqinisekisa insiza enhle kakhulu yezilwane ezifuywayo, ikakhulukazi ezifuywayo Inkonzo yokujola nayo ekhaya.
Ikheli: Nge-Garibaldi 233
Isihlalo 2: IVia Lanzetta ingu-439 / G
Ucingo: 090 346345
Umakhala ekhukhwini: 340 5317496